कुनै पनि बजारमा पाँच लाभदायक स्थितिहरू Martech Zone
कुनै पनि बजारमा पाँच लाभदायक स्थितिहरू
मंगलवार, फेब्रुअरी 23, 2010 आइतवार, मार्च १,, २०१। अनुदान लेन्ज
मेरो पुरानो कर्पोरेट जीवनमा, म उत्पादनहरू बनाउने मानिसहरू, र मार्केटिंग गर्ने र बेच्ने मानिसहरू माझको सञ्चार अन्तरमा म छक्क परें। एक टिन्करर र सामाजिक समस्या समाधानकर्ता हुनाले, म सँधै निर्माताहरू र बजार बीचको खाडल पार गर्ने बाटो फेला पार्न प्रयास गर्दछु। कहिलेकाँही यी प्रयासहरू सफल थिए, कहिलेकाँही उनीहरू सफल भएनन्। यद्यपि मैले निगमहरूको भित्री कामकाजहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्दा मैले ठेस खाएको छु जुन म ब्रान्डि and र उत्पाद विकासको बारेमा केहि विश्वव्यापी सत्य हो भनेर विश्वास गर्दछु।
पहिलो सत्य, ब्रान्ड फोकस, व्याख्या गरिएको छ यहाँ.
दोस्रो सत्य, कोटी स्थिति, कसरी कम्पनीहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, र कसरी बजारमा स्थिति सफलता डिक्टेरिट गर्दछ। के हुन्छ तल यस अवधारणाको छोटो विवरण र प्रत्येक स्थानका उदाहरणहरू छन्। (लेखकको नोट: मलाई विश्वास छ कि यो सत्यको आधार मेरो व्यक्तिगत विकासको क्रममा पढिएको पुस्तकबाट आएको हो, त्यसैले यदि यो परिचित देखिन्छ भने, यदि तपाईं यस पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ भने, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस्। म प्रयास गर्दै छु करीव दुई दशक को लागी मेरो मूल स्रोत खोज्न)
माइक्रोसफ्ट, एक ठूलो बहुराष्ट्रीय कम्पनी भएको छ, जताततै प्रतिस्पर्धा गर्दछ। तिनीहरूको धेरै उत्पादनहरूमा तिनीहरूसँग केवल बजार सेयरको स्वामित्व हुँदैन, तर प्रायः सम्पूर्ण बजारको स्वामित्व हुन्छ। अझै केही क्षेत्रमा तिनीहरू टाढा दोस्रो, तेस्रो वा चौथो हुन्छन्। यो किन हो? जे होस् पूर्ण उत्तर लामो र प्राविधिक हो, उपभोक्ता-स्तर उत्तर एकदमै सरल छ: कोटिहरू, ब्रान्ड होईन, बजारमा सफलता परिभाषित गर्दछ।
एक कोटी, केवल परिभाषित, के तपाइँको उपयोगकर्ता को तपाइँको उत्पादन को वर्गीकृत हुनेछ। यदि मैले तपाइँलाई विन्डोज एक्सपी कुन प्रकारको उत्पादन हो भनेर सोध्यो भने तपाईले मलाई सम्भवतः "एक अपरेटि System प्रणाली?" भन्नुहुनेछ? त्यसैले अपरेटिrating प्रणाली उत्पादनको कोटी हुनेछ, र माइक्रोसफ्ट स्पष्ट रूपमा वर्गमा हावी हुनेछ।
तर जब म तपाईंलाई एउटा Zune देखाउँछु र कोटी को लागी सोध्छु, तपाईं सम्भवतः मलाई बताउनुहुन्छ MP3 प्लेयर। माइक्रोसफ्टले एप्पलको लागि यस कोटीलाई स्पष्ट रूपमा हराइरहेको छ। किन माइक्रोसफ्ट यहाँ प्रतिस्पर्धा छनौट हुनेछ, जब एप्पल स्पष्ट रूपमा हावी? खैर, बाहिर जान्छ कि त्यहाँ एक राम्रो नम्बर दुई हुन पैसा बनाउनु पर्छ भने पनि नम्बर एक विशाल छ। वास्तवमा त्यहाँ एक कोटी मा पाँच अलग अलग स्थानहरु छन् कि लाभदायक छन्, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्नु हुन्छ।
पाँच लाभदायक श्रेणी स्थिति
कुनै पनि बजार कोटीका लागि पाँच लाभदायक स्थानहरू हुन् बजार नेता, दोस्रो, वैकल्पिक, बुटिकर नयाँ वर्ग नेता। यी प्रत्येक स्थितिमा पैसा कमाउन सम्भव छ, र बढ्न पनि सम्भव छ। तर बाहिरी सहयोग बिना एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान असम्भव छ।
माथिको छविमा, प्रत्येक स्थिति यसको सम्बन्धित बजार सेयर स्थिति र आकारमा कोरिएको छ। तपाईंले देख्न सक्नुहुने रूपमा, आकारहरू चाँडै साना मात्र हुने छ। त्यसोभए किन यो पछि सार्न असम्भव छ? किनभने जब प्रत्येक स्थान यसको अगाडिको भन्दा उल्लेखनीय रूपमा सानो हुन्छ, स्थिति परिवर्तन गर्न आवश्यक लगानीले नाफा बदल्नबाट धेरै टाढा राख्छ।
अब, प्रत्येक पोजीशनलाई व्यक्तिगत रूपमा हेरौं, प्रत्येक स्थिति कसरी भिन्न छ भनेर हेर्न। यस अभ्यासको लागि, हामी कोला कोटि प्रयोग गर्न सक्दछौं, किनकि यो धेरै जसो व्यक्तिले राम्ररी बुझेका छन्।
स्थिति एक: बजार नेता
कोक, अवश्य पनि एक नेता हो। तिनीहरू जताततै छन्, र तिनीहरूको नाफा प्रख्यात छ। तिनीहरू एक नेता को एक प्रमुख उदाहरण हो। र पेप्सीमा उनीहरूसँग यत्तिको बलियो प्रतिस्पर्धी भएकोले उनीहरूले वास्तवमै कुनै पनि बजार बाँडफाँड गर्न सक्दैनन्। त्यसोभए उनीहरूको वास्तविक विकल्प नयाँ बजारमा प्रवेश गर्नु हो। किन? किनकि पेप्सीलाई सेफवेबाट बाहिर निकाल्नको लागि चीनको वितरण खोल्नको लागि यो सस्तो छ।
स्थिति दोस्रो: दोस्रो
पेप्सी कडा दोस्रो छ। तिनीहरू पनि जताततै छन्, र वास्तवमा कोकको एकमात्र विकल्पको रूपमा सोच्दछन्। त्यसोभए उनीहरू कसरी बढ्छन्? कोकबाट भाग लिन महँगो र गाह्रो छ, तर कोकको एक वर्ष पछि चीनमा प्रवेश गर्नु धेरै सजिलो र सस्तो छ। उनीहरूले कोकको कोटी विकासको मस्यौदा गरे।
स्थिति तीन: वैकल्पिक
देशका केहि क्षेत्रहरूमा आर सी कोला वैकल्पिक हो। तर तिनीहरू जताततै छैनन्, र उनीहरूसँग मार्केटिंग फायरपावर छैन ठूला दुईसँग। त्यसोभए उनीहरू कसरी बढ्छन्? क्षेत्र द्वारा क्षेत्र। तिनीहरू निर्दिष्ट च्यानलहरू लक्षित गर्दछन् जहाँ तिनीहरूलाई स्थानीय वा अद्वितीय रूपमा देख्न सकिन्छ र हुर्कन सकिन्छ? ढोका-ढोका ?.
स्थिति चार: बुटीक
जोन्स सोडा एक उत्कृष्ट बुटीक हो। तिनीहरू कोला बेच्छन, तर जोन्स कोलाको बारेमा कम छन्, र कोलाको अनुभवको बारेमा अधिक। कोला केवल शुद्ध गन्ना चिनी, लेबलमा कस्टम आर्टवर्क, र उच्च मूल्य ट्यागको साथ गिलासको बोतलहरूमा आउँदछ। यो स्पष्ट रूपमा majors मुख्यधारा प्रतिस्पर्धा होईन। तैपनि तिनीहरू लाभदायक छन्, र वफादार निम्न छन्। किन? किनभने तिनीहरू ओब्सीसीली रूपमा कोला उपभोक्ताहरूको विशेष उपसमूहमा डेलिभर गर्छन्।
स्थिति पाँच: नयाँ वर्ग नेता (एनसीएल)
त्यसोभए यदि तपाइँ एक कोटी बिघटन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यो कसरी गर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा, म रेड बुलको पछाडि बजार प्रतिभावनाहरू सोध्छु। उनीहरूले पूरै साम्राज्य निर्माण गरे जसले सबैलाई आफू कोला होइन, तर ऊर्जा हो भनेर भन्दछन्। अवश्य पनि रेड बुलले कोकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् जब उनीहरू सुरु भए। तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई आफ्नो श्रेणी, ऊर्जा, राम्रो बताउन सक्दछन्। र त्यसो भए पनि कोला संग प्रतिस्पर्धा छैन? उनीहरूले नयाँ कोटि को स्टोर सेल्फमा जान प्रयोग गरे जुन कोक पहिले नै जित्दै थियो। र तिनीहरूले यो कहिल्यै कोक वा पेप्सी हेड टु हेडसँग प्रतिस्पर्धा बिना नै गरे।
महान, त्यसोभए यो किन फरक छ?
राम्रो प्रश्न। र जवाफ तल आउँछ: यदि तपाइँ तपाइँको स्थिति थाहा छ भने, तपाइँ कसरी मुनाफा प्रतिस्पर्धा गर्न थाहा छ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन तपाईं कहाँ उभिनुभयो भने, तपाईंलाई सम्भवतः ब्यापार, मार्केटिंग, वा विकास योजनामा ​​बेचिन्छ जुन तपाईंलाई कब्जा गर्न नसक्ने ठाउँमा लैजानको लागि धेरै पैसा खर्च गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एक पटक तपाईंलाई आफ्नो स्थिति थाहा छ, तपाईं व्यवसाय र मार्केटिंग योजनाहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको नाफा स्थिति ल an्कर गर्दछ, र उच्च दर फिर्ताको उपज दिन्छ।
टैग: अनुदानबजार स्थितिनयाँ वर्ग नेतावैकल्पिकबुटिकबजार नेतादोस्रो
अनुदान लेन्ज यसका संस्थापक सदस्यहरु मध्ये एक हो साक्ष्य स्टुडियो, एक ब्रान्डि and र उत्पाद विकास सामूहिक। ऊ प्रभावी र ब्रान्डि and र उत्पादन विकास योजनाहरू विकास गर्न ठूला र साना दुवै कम्पनीहरूसँग काम गर्दछ।
डिजिटल र पारम्परिक प Al्क्तिबद्ध गर्दै: सानो थोरै कुरा
सबैभन्दा उत्तम मार्केटिंग टेक्नोलोजी
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::23। बिहान
समीक्षा गर्न सधैं राम्रो छ र मलाई प्रस्तुतीकरण मनपर्छ - राम्रो भयो र स्पष्ट रूपमा म बुटीक हुँ 🙂
एउटा चाखलाग्दो ट्विस्ट भनेको हो– क्रेताले के खोजिरहेको छ भन्ने आधारमा– तपाईं फरक भूमिकामा हुन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, जोन्स बुटीक/क्राफ्ट/प्रिमियम सोडाका प्रमुख खेलाडी हुन्, तर कोकको विरुद्धमा हेर्दा स्पष्ट रूपमा बुटीक हो।
यसले हाम्रो कामलाई रोचक बनाउँछ।